Kasị mma nke apụ-piste ụmụ gị snow enyo anya! - ULLER
Freeride mara dị ka modality nke snowboard Na nke ị na-eme a ala kpamkpam anya-piste, na kpam kpam na-amaghị nwoke snow, na-ezere ndị niile na nkume na ihe mgbochi na-abịa anyị ụzọ. Ka ọ dị ugbu a, enwere asọmpi na-asọ oyi na-efe efe n'okporo ụzọ awara awara nke na-ezute ọnọdụ kacha mma, ọ bụ ezie na eziokwu bụ na ndị hụrụ freeride n'anya n'eziokwu na-ahọrọ ezigbo ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ na ụfọdụ ịwụ elu mmanya.
Dị ka ọ dị, ụfọdụ ndị na-ejikọ freeride na ọzụzụ ndị ọzọ dị ka freecarve ma ọ bụ ọbụna nnukwu snowboarding. Ma eziokwu bụ na ọtụtụ oge ọ bụ naanị obere nkọwa. Dịka ọmụmaatụ, okpokoro eji eme ihe na nke a ga-adị ọtụtụ n'ihi na ọpụpụ freeride, bọọdụ ahụ kwesịrị ịnye ezigbo omume na snow ntụ ntụ, snow siri ike na mgbe ị na-amali elu site na okwute mmanya anyị jidere nke anyi snow ugogbe anya.
Ebe ọ bụ na ha dị ọtụtụ ma na-agbanwe agbanwe, ogwe osisi freeride na-ewere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ahịa niile, ebe ha na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ nke ọma n'ọnọdụ niile, ha bụ mbadamba ala niile: ma na mkpọda ugwu, na snowpark ma ọ bụ na ọkara ọkpọkọ, na kwa na mkpọda ebe ezumike gị.
Anyị na-ekwu maka bọọdụ ntụzi aka, ya bụ, a haziri ha ka etinyere ha naanị n'otu ụzọ: n'ihu, n'ihu. A snowboard nwere directional udi mgbe n'ọnụ na ọdụ na-abụghị symmetrical. Dụ ahụ dị warawara, dị mkpụmkpụ, ma dị ntakịrị karịa ihu mbadamba ahụ. N'ihi nke a, na mbadamba freeride, a na-etinye njikọ ahụ ntakịrị ka ọ bụrụ na a ga-ebu ibu onye na-agba ya n'azụ bọọdụ ahụ wee si otú a na-akwụ ụgwọ maka asymmetry a. Ọbụlagodi na ihe niile, ị nwere ike iji ụdị tebụl a rụọ ọrụ fakie, ọ bụ ezie na anaghị haziri ya nke ọma.
Ejiri mbadamba Freeride bụrụ nke siri ike, ogologo ma dị njọ karịa bọọdụ freestyle. N'agbanyeghị nke a, ha nwere akwa dị nro ma nwee ike ịmegharị, nke bụ nnukwu enyemaka maka ndị mbido. Ma ọ bụ na freerides bụ ogwe igwe snow kachasị nwee ike ịchọta, ebe ọ bụ na ha na-arụ ọrụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ niile ị nwere ike ịchọta na ọkwa dị mma.
Site n'ụzọ, site na mbadamba "ugwu niile" ị nwere ike iyi akwa akpụkpọ ụkwụ "nro" ma ọ bụ "nzọụkwụ". Nkewa n'etiti njikọ ndị a dị oke (n'etiti 50 na 55 centimeters) na akụkụ ha dịgasị iche dabere na onye na-agba ịnyịnya nke na-agba ịnyịnya, n'ozuzu, n'etiti 0 na 15 ogo na azụ na n'etiti 15 na 25 n'ihu. Agbanyeghị, ndị ọzọ na-agba ịnyịnya nzọ na ọnọdụ "ọbọgwụ". Ndị na-acha ọcha kachasị ọcha na-etinye njikọta ntakịrị ka ọ nwee ike ịse mmiri ka mma ... Na-eyi uwe kachasị mma ha mgbe niile snow ugogbe anya.
Mmepe nke snowboard O sitere na egwuregwu ndi ozo dika skateboarding ma ọ bụ sọọfụ. Na 1965, engineer Sherman Poppen wuru mbadamba snow nke mbu maka nwa ya nwanyi na Muskegon, Michigan. Ọ bụ mbadamba osisi na-enweghị ihe njide maka ụkwụ na eriri n'ihu nke na-enyere aka ijigide nguzozi. Brunlọ ọrụ Brunswik malitere ịzụlite na ire echiche ọhụrụ a nke nwere ihe ịga nke ọma na 60s na 70s.
Ọzọkwa n'oge a, skitrije Milovich nọfere sịnịma dị ka skis kama ọ sara mbara ma na-ekwe ka “sọọsọ” na snow ntụ, a maara dị ka Winterstick.
Taa enwere ọtụtụ nde mmadụ na-eme egwuregwu a ebe ọ ghọrọla ọtụtụ ndị ebi ndụ na egwuregwu ebe ejiji na akwa snow nọ ebe a.
Kedu mgbe snowboard rutere Spain?
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ Sherman Poppen mepụtara snowboarding na United States na 60 ma ọ ghọrọ ihe a ma ama na 80, ọ bịarughị Spain ruo mmalite 90's.
Kedu usoro nke snowboarding?
Ndị a kacha mara amara bụ Frelete, Freeride, Slalle Paraloml, Boardercross na Snowboard maka ugwu ma ọ bụ obodo gafere. N'ime Freestyle anyị na-ahụ ihe ndị a:
Slopstrong: jumps, ụgbọ okporo ígwè na drawers. Ọ ga-abụ ịdọ aka ike n'egwuregwu Olympic site na 2014 Winter Olympics.
Ebee ka m nwere ike ịgba snow na Spain?
Jiri ma gbanahụ ya snow ugogbe anya gaa ebe kachasị mma: Baqueira-Beret (na ọkwa m gara aga ị ga-achọta ozi niile), Astún, Candanchú, Formigal, Cerler na Sierra Nevada.
Nwee obi ụtọ na Snowparks ha tinyegoro. Ha na-arụ ọrụ nke ukwuu site na nnukwu shapers. Maka ụtọ anyị, ihe kachasị mma bụ nke Formigal. Ọnọdụ dị n'etiti ndị na-agba ya bụ ihe a na-agaghị edili.
Ndi ama enem fi ndikop etop etuep?
Ndị a bụ ụfọdụ vidiyo na-enweghị atụ nke ga-eme ka ị na-asọ mmiri ụbọchị niile ... Echefula ya!
Cheta iburu ihe egwuregwu gi niile tinyere nke gi snow ugogbe anya,nakwa inwe ọtụtụ nkwadebe nke anụ ahụ na nke uche, ma karịa ihe niile ... Achọrọ m ịfefe ya!
Windsurfing bụ egwuregwu jupụtara na nzuzo na ọchịchọ ịmata ihe ị ga-ahụ n'anya ịchọpụta. Ọzọ, anyị ga-agwa gị banyere ndị nna ochie nke omume a, banyere ntụpọ ndị ị na-agaghị echefu ma ọ bụrụ na-amasị gị